Naftaydoy Sayidow, Naftaydoy, Kaniisadda Caalamiga ah ee Ilaah Switzerland (WKG)
Ilmaha badankood waxay bartaan muraayadaha weyneynta waxayna ku raaxeystaan ​​ayagoo adeegsanaya wax walba oo la weyneeyo. Cayayaanka waxay u egyihiin daanyeer sheekooyin saynis ah. Walxaha wasakhda iyo ciidda waxay u eg yihiin sariir weyn oo wabi ama sida cidla oo kale. Markaad galaaska weyneyso wejiga saaxiibkiis, waxaa badanaa jirta sabab lagu qoslo.
Maryan oo ahayd hooyadii Ciise, wali ma aysan aqoonin muraayadaha indhaha la weyneeyo. Laakiin way ku baraarugtay wixii ay ku tidhi Luukos 1,46, markay dareentay inay amaantu ka dhex baxdo warkii ahaa inay barakeysay inay noqoto hooyada Masiixa. Maryanna waxay tidhi, Naftaydu Rabbigay ku ammaaneysaa. Ereyga Griigga ee ah “in la sarreeyo” waxaa loola jeedaa samaynta weyn iyo muuqaal, ka dibna marka si guud loo eego kor u qaadida, ammaanta, ammaanta, kor u qaadida, sarreynta. Faallo ayaa leh: «Maria kor u qaadday Rabbiga iyadoo u sheegta dadka kale sida sare iyo muuqaal ee uu ka ahaa aragtideeda. Iyada oo loo jeedinayo (Giriig ahaan) Maria waxay farta ku fiiqday in ammaanta Ilaahay ay ka timaado qalbigeeda. Cibaadadaadu waa mid shaqsiyeed; waxay ka timaadaa qalbiga. » Heesta ammaanta Maryan waxaa loo yaqaanaa "Magnificat", taasoo ah muujinta Latinka ee "kor loo qaado, la kordhiyo". Maryan waxay tidhi nafteedu korisay Rabbiga. Tarjumaadaha kale waxay isticmaalaan ereyada «ammaanta, sarraynta, ammaanta».
Sidee Rabbiga u kicin kartaa? Waxaa suuragal ah in lexicon na siinayo tilmaamo. Hal macne waa in la weyneeyo cabirkiisa. Haddii aynu kor u qaadno Rabbiga, isagu wuu korayaa. JB Philipps wuxuu yiri: "ilaahaagu wuu yaraa". Kor u qaadida iyo kor u qaadida Rabbi waxay naga caawineysaa annaga iyo kuwa kaleba inaan fahanno inta dhererkiisu ka sarreeyo midka aan ka fikirnay ama ka fikirnay.
Micnaha kale ayaa ah in Eebbe horkeeno indhaha dadka hortiisa kuwa waaweyn oo aad u muhiim ah. Markaan ka fikirno oo ka hadalno sida uu Rabbi u weynaaday, waxay naga caawineysaa inaan fahamno cidda aan isaga nahay. Jidadka Eebbe iyo fikradihiisu aad iyo aad bay uga badan yihiin ugana weyn yihiin kuwayaga, waana inaan is xusuusino nafteenna iyo midkeenaba. Indhaheenna waa ku kori karnaa haddii aan taxaddar lahayn.
Joe Stowell wuxuu leeyahay, "Ujeedada nolosheenna waa inaan dadka kale u aragno waxay tahay Ilaah siduu yahay markay arkaan oo ay dareemayaan jacaylkiisa innaga." Waxaad dhihi kartaa nolosheenu waa sida daaqad ay dadka kale arkaan Masiixu na inagu dhex nool. Kuwo kale ayaa isbarbardhig ku sameeyay in aan nahay sidii muraayadaha oo ka turjumaya isaga iyo jacaylkiisa. Waxaan ku dari karnaa liistada inaan nahay dhalo weyneeya. Sida aan ku nool nahay, dabeecaddiisa, rabitaankiisa, iyo qaababkiisa ayaa u noqon doona kuwo sii caddeeya oo u weynaada daawadayaasha
In kasta oo aan ku noolaanno nolol deggan oo deggan xasillooni iyo sharaf oo dhan (1 Timoteyos 2,2), waa inaan daaqada ka nadiifsanahay, oo aan tusno muuqaal cad oo aan kordhinno nolosha iyo jacaylka Ciise ee nagu dhex jira. Naftaydoy, kor u qaad.